Al-Shabaab oo laga mamnuucay Britain
Dowladda Britain ayaa mamnuucday ururka Al-Shabaab, kuna tilmaamtay inuu yahay urur argagixiso
Xoghayaha Arrimaha Gudaha Britain Alan Johson ayaa soo saaray go'aan dalka Britain looga mamnuucayo ururka Al-Shabaab. go'aankan ayaa lagu sheegay in ururka Al-Shabaab uu ka mid yahay ururada Argagixisada caalamiga ah.
Go'aankan ayaa qoraya in wixii maanta ka danbeeya gudaha Britain ay mamnuuc ka tahay in laga taageerro ama lacago looga uruuriyo ururka Al-Shabaab. Alan Johson wuxuu sheegay in qaadashada go'aankan ay aad ugu adkayd, balse wuxuu hoosta ka xariiqay in go'aankani yahay mid lama huraan ah. Go'aankan ayaa la horgayn doonaa baarlamaanka Britain si ay u ansixiyaan.
Xukuumadda Somalia ayaa soo dhaweysay go'aankan. Wasiirka Hidaha iyo Tacliinta sare Maxamed C/laahi Oomaar ayaa VOA-da u sheegay in go'aankaasi yahay mid wax weyn u taraya arrimaha Somalia.
Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi rug caddaa ah kuna nool dalka Britain ayaa sheegay inay dhici karto in go'aankan uu saameyn ku yeesho Somalida degan Britain, isagoo sheegay in dowladdu ay dhawaanahan ka cabsi qabto in bulshada Somalida ay ku soo dhex-dhuuntaan dad doonaya inay halis galiyaan Britain.
Go'aankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhawaan dalka Britain uu ku soo wajahan yahay madaxweynaha Somalia, Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Qeybta hoose ee qoraalkan ka dhagayso, wareysiyada Wasiirka Oomaar, Maxmud Sh. Dalmar iyo Weriyaha VOA Europe C/salaan Hereri.